Fety i Marx, Lenin ary Ho Chi Minh tamin'ny mariazin'i Engels tany India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Fety i Marx, Lenin ary Ho Chi Minh tamin'ny mariazin'i Engels tany India
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao Mafana India • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Novambra 17, 2021
Fety i Marx, Lenin ary Ho Chi Minh tamin'ny mariazin'i Engels tany India.
Ny antoko kaominista ao an-toerana no nitarika tao amin'ny fanjakan'i Kerala atsimo andrefan'i India nandritra ny 60 taona lasa, ary mbola malaza amin'ny mpifidy.
Tao an-tanànan'i Athirappilly tamin'ny alahady, ny mpampakatra, Friedrich Engels, dia namatotra ny fatotra tamin'ny ampakarina, Bismitha.
Nanatrika izany koa i Lenin, rahalahin’i Engels, sy ny naman’ny mpampakatra, Marx sy Ho Chi Minh.
Mpikambana ao amin'ny Antoko Komonista India izy efa-dahy.
Any amin'ny fanjakan'i Kerala any atsimoandrefan'i India, ny antoko kaominista ao an-toerana no nitarika ny ankamaroan'ny 60 taona lasa, ary mbola malaza amin'ny mpifidy.
Tena malaza tokoa, ka matetika ny ray aman-dreny ao amin'ny fanjakana no manonona ny zanany amin'ireo olo-malaza ao amin'ny hetsika kominista.
Ny mpampakatra, Friedrich Engels, dia namatotra ny fatotra tamin'ny ampakarina, Bismitha. Nanatrika izany koa i Lenin, rahalahin’i Engels, sy ny naman’ny mpampakatra, Marx sy Ho Chi Minh.
Noho izany, rehefa nivory hanao mariazy i Marx, Lenin, ary Ho Chi Minh Kerala, miaraka amin'i Friedrich Engels mandeha amin'ny lalantsara, tsy misy ifandraisany amin'ny fandehanana fotoana izany.
Tao an-tanànan'i Athirappilly, ny mpampakatra, Friedrich Engels, izay mitonona anarana amin'ny filozofa alemà tamin'ny taonjato faha-19 izay nanampy tamin'ny famoronana ny Marxisma, dia namatotra ny fatotra tamin'ny ampakarina, Bismitha. Nanatrika izany koa i Lenin, rahalahin'i Engels, izay nomena anarana avy amin'ilay lehilahy tao ambadiky ny Revolisiona Rosiana tamin'ny 1917, ary koa ny naman'ny mpampakatra, Marx sy Ho Chi Minh, izay mitondra ny anaran'ny rainy mpanorina ny Marxisma sy ny mpitarika ny revolisionera Vietnamiana.
Mpikambana ao amin'ny Antoko Komonista India izy efa-dahy. Raha ny marina, miasa sy mipetraka ao amin'ny ultra-kapitalista i Marx Dubai, saingy niverina nanidina nahita ny namany nifanao voady tamin’ny fofombadiny, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Lanonana fampakaram-bady iray hafa natao tamin'ny volana Jona tao amin'ny fanjakan'i Tamil Nadu, nahita ny Sosialisma nanambady teo anatrehan'ireo rahalahiny Kominisma sy Leninisma, ary koa ny Marxisma zana-drahalahiny.